तिज–गीतमा मेरो आवाज ‘सुट’ गर्छ भन्छन्
२०७८ भदौ २४ बिहीबार ०६:४५:००
गायक खुमन अधिकारीले एक हजारभन्दा बढी तिज–गीत गाइसकेका छन् । उनी विशेषगरी चाडबाड (तिज, दसैँ, तिहार)का अवसरलाई लक्षित गरी गीत गाउने गरेको सुनाउँछन् । यस वर्ष पनि उनले १८ वटा तिज–गीत गाएको बताए । यसै सन्दर्भमा गायक अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको अंश :
यसपटकको तिजलाई लक्षित गरी कतिवटा गीत गाउनुभयो ?
मैले ०६३ सालदेखि नै तिजको गीत गाउन थालेको हुँ । पुरुष आवाजमा तिज–गीत गाउन सुरु गर्ने पनि मै हुँ । अहिले पनि तिजका अधिकांश गीतमा मेरै आवाज सुनिन्छ । यो वर्ष पनि तिजका १८ वटा गीत गाएको छु । ती सबै मौलिक गीत हुन् ।
तिज महिलाको विशेष चाड भनिन्छ, अनि तिज–गीतमा पुरुषको आवाज किन ?
तिज महिला दिदीबहिनीको विशेष पर्व हो । गीत गाउन दिदीबहिनीहरूले मलाई नै अफर गर्नुहुन्छ । सबैले तिज–गीतमा मेरो आवाज ‘सुट’ गर्छ भन्नुहुन्छ । महिलाको विशेष पर्व भए पनि यसलाई सफल बनाउन पुरुषले पनि साथ दिनुपर्छ । तिज मात्रै नभएर मैले अन्य चाडपर्वहरूमा पनि गीत गाउँछु ।
पहिले र अहिले तिज–गीतमा फरक के देख्नुहुन्छ ?
पहिले विवाहित महिला दिदीबहिनीको कथामा मात्रै गीत सिर्जना हुन्थ्यो । पछिल्लो समय अविवाहित दिदीबहिनीको बारेमा पनि गीत बन्न थालेको छ । यस्तै, प्रविधिको विकाससँगै गीत–संगीतमा पनि परिवर्तन भएको छ । अहिले डिजिटल प्लेटफर्मले हाम्रो गीत–संगीतलाई अझै व्यापक बनाएको छ ।
अचेल तिजका अधिकांश गीतमा मायाप्रेमका कुरा हुन्छन् । महिला संवेदना र मौलिक संस्कृतिमा आधारित रहेर गाउन सकिँदैन ?
अहिलेका गीत मात्रै होइन, भिडियो पनि परिवारसँग बसेर हेर्न नसक्ने खालको बन्न थालेका छन् । तिजका अवसरमा गाउँदैमा तिज–गीत हुने होइन । तिजका गीत हुन शब्द, भाका र पहिरनमा पनि मौलिकता हुनुपर्छ । कतिपय साथीहरूले शब्द चयनमा ध्यान दिनुभएको छैन । त्यस्ता गीतलाई नियमन गर्नुपर्छ । मौलिक गीतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तिज हाम्रो संस्कृति हो, यसकारण तिजमा गाउने गीतमा मौलिकता झल्कनुपर्छ, हाम्रो संस्कृति बोल्नुपर्छ । मैले गाएका अधिकांश तिज–गीतले नेपाली मौलिकता बोकेका छन् ।